Kutheni i-2016 iyakuba yindawo yokuThintela iHlabathi kuQoqosho oluShukumayo | Martech Zone
Izazinzulu eAntarctica zikhuphela imidlalo yeselfowuni. Abazali baseSyria bakhathazwa ngabantwana abasebenzisa kakhulu itekhnoloji. Abahlali besiqithi iAmerican Samoa banxibelelana ne4G, kunye neeherpas kwincoko yeNepal kwii-smartphones zabo ngelixa bephethe imithwalo engama-75.
Uqoqosho oluhambahambayo ukufikelela kwinqanaba lokuncipha.
Abasebenzisi abaselfowuni abasebenza kwihlabathi liphela, kunye nedatha evela kwiNokia kunye neTUNE
Siva amanani amakhulu ngalo lonke ixesha. I-800 yezigidi sababhalisi abatsha abaneselfowuni kulo nyaka, kwihlabathi liphela. I-600 yezigidi ngaphezulu ngo-2016. Yongeza konke kunye nabasebenzisi be-smartphone abakhoyo, kwaye kuyakubakho amalungu angama-6.5 ezigidi ale klabhu ngo-2020.
Ngo-2015 malunga neepesenti ezingama-47 zeplanethi yayine-smartphone, ngokwe Idatha yeNokia. Ngo-2016, eli nani liza kugqitha ngaphaya kwe-50%, lisondele kwi-4 yezigidigidi. Ngamanye amagama, ikhula ngokukhawuleza kunabemi behlabathi, ngoku abamalunga ne-7.3 yezigidigidi.
I-TUNE ibona ngakumbi ukuthengiswa kwe-m-yorhwebo kunye nokukhutshelwa e-India kunalo naliphi na ilizwe, ngokulinganayo.
Kungenxa yoko le nto ukongeza kumakhulu ezigidi zabasebenzisi be-smartphone e-US, i-86% yexesha leselfowuni elichithwe kwii -apps kwilizwe eliphuhlileyo, i ukukhula ngokukhawuleza kwe-m-commerce e-US kwiikota ezimbalwa ezidlulileyo, kunye nendima enkulu ye-m-yorhwebo kwihlabathi lokuqala le-India (kunye nendawo encinci, China)… sibona umzuzu obalulekileyo kutshintsho olukhulu lweselfowuni abaphuhlisi Ukusebenzela, abathengisi beva malunga noko, kwaye iimveliso bezilindelwe.
Yintoni le ikhetheke ngolu hlobo?
As GameStop, umzekelo, undixelele: abathengi bakho abasebenzisa iapps bafanelekile ukuphinda ixabiso elinexabiso eliphezulu kubathengi beklabhu Kwaye, uqoqosho lokuqala olushukumayo lwenza zonke iintlobo zamathuba amatsha. Sikubonile ukukroba kwayo okokuqala kumashishini ehlabathi akhiwe ngaphezulu kweapps ezinje ngeUber, AirBnB, Amazon, njalo njalo. Amaza alandelayo yiSephoras, i-Sony, i-Staples, kunye nezinye iimveliso ezinkulu kunye namashishini aqala ukukhula kwintengiso yomntu ngamnye kunye nolwalamano lwabathengi kunye nokulandela kwabo, abasebenzisi, izizwe, okanye abathengi ... athetha ntoni na amashishini abo kuqoqosho lokuqala olushukumayo.
Imidlalo inkulu. Kodwa sibona uqoqosho olusakhulayo olukhulayo kwivenkile, ezothutho, indlela yokuphila, kunye nakwiinkqubo zentlalo.
Ukuhanjiswa kwedrone? Mhlawumbi hayi kwangoko.
Kodwa ngaba ukuncediswa ngu-Uber ngexesha elifanelekileyo lokuhambisa izinto zeofisi ezivela kwiStaples ekunokwenzeka ukuba zihlala iiyure ezimbalwa kwiziko elilawulwa yiAmazon? Into enje ayikabikho kwikamva.
Izigebenga zemidlalo ezihambayo ezinje ngeSupercell, iKabam, iZowuni yoMatshini, ubuGcisa be-Elektroniki, kunye neKing baba ngabokuqala ukubonisa ilizwe indlela yokwenza imali kwiselfowuni. Kodwa i-70-100 yezigidigidi zehlabathi eziza kuchitha ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kwisithuba nje seminyaka embalwa ziya kuncitshiswa $ 500-550 yezigidigidi iya kuchitha kwizinto ezingezizo ezokwenyani kunye neenkonzo ezithengwe ngefowuni kodwa zihanjiswe, kwinqanaba elithile, kwihlabathi lokwenyani.
Kwaye kwinyani leyo, ukuhamba-kuqala akuyi kuba malunga nokuchuma. Kuya kuba malunga nokusinda.
Esi sithuba sisekwe kwingxelo ka TUNE.
Khuphela iNgxelo epheleleyo Apha!
tags: iimvelisoimidlalom-yorhweboapps mobileuqoqosho oluhambayoiselfowuni kuqalaurhwebo mobileefowuniayaham-